कोरोना भाइरसले शरीरमा कसरी हानी पुर्‍याउँछ ? – सत्य तथ्य र निष्पक्ष्य समाचारको लागि
admin February 21, 2020 1 min read
कोरोना भाइरस शरीरको शरीरको अन्य तन्त्रहरुलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ । मर्सको ९२ प्रतिशत विरामीहरुमा फोक्सो बाहेक शरीरको अन्य अंगहरुमा पनि प्रभाव हुन्छ भन्ने कुरा सन् २०१४ मा भएको एउटा सर्वेक्षणमा भनिएको थियो । यस्तो प्रभाव सम्पूर्ण शरीरमा हुन सक्छ । कोरोना भाइरसका कारण लिभर पनि नष्ट हुन सक्छ । source
Tags: कोरोना भाइरसले शरीरमा कसरी हानी पुर्‍याउँछ ?
Previous ओलीको स्टालिनपथ : मुटु छ भने नडराए हुन्छ !
Next धनी मानिसहरु कति फरक ढंगले सोच्छन् ?